Hoy – Page 4 – Wargeyska Waxgarad
Isqabqabsiga Xajka Sannadkan
July 13, 2018	Warbixinno 0
Maalintii Isniinta, 9’kii Julaay 2018, ayaa wareegto ka soo baxday xafiiska Ra’iisul Wasaare Xasan Khayrre waxaa xilka lagaga qaaday Wasiirkii Awqaafta iyo Arrimaha Diinta, Xildhibaan Xasan Macallin Xuseen. Jagadaas ayaa waxaa si ku-meel-gaadh ah waxaa loogu wareejiyey Wasiiru Dawlahii wasaaradda, Mudane Cabdixakiin Xasan Ibraahim Ashkir. Xildhibaan Xasan Macallin Xuseen waxaa …
July 8, 2018	Afkeenna 0
Iyada oo ay jiraan gefaf badan oo laga galo dhismaha ereyada, haddana waxa aan isku deyayaa in aan gef gaar ah halkaan kaga hadlo oo weliba xeer lagaga gudbo aan ku soo bandhigo. Marka tiro laga hormariyo erey, waxa aan arkay iyada oo in badan la khaldayo oo aan la …
Shidaalka Ogaden Basin ee dhulka Soomaali Galbeed
June 29, 2018	Warbixinno 0
Khatartii ugu weynayd oo soo wajahday Soomaalida gumeysiga ku hoos nool Wuxuu Barkinka idiin soo gudbin doontaa qoraallo taxane ah oo ku saabsan mawduuca shidaalka ee degaanka Soomaalida Itoobiya gumeysato. Qeybtii 1aad: Hordhac Shirkadda Shiinaha ee Poly-GCL ayaa maanta (28 Juun 2018) bilaabaysay soosaarka gaaska ceelasha Elelle (Hilala). In kasta uu koobnaan doono, …
June 26, 2018	Afkeenna 0
Halgelin: Ereygaan muddo aad u fog baa iigu dambaysey araggiis iyo maqalkiisba. Xalay ayaan Youtube ku arkay qof qoray hees uu qaaday Maxamed Mooge xilli uu jabhad ahaa. Meerisyadaan oo uu Maxamed ugu xogwarramayo raggii ay asxaabta ahaayeen oo weli Hargeysa ku dambeeya, ayaa sidaan loo qoray: Hadal iga dardaarana …
Mu’min god labo jeer lagama wada qaniino
June 24, 2018	Amni, Aragti, Faallo 0
Meelaha ay Xabashidu dullaysatay waxaa ka mid ah gobolka Gedo, oo ilaa 1996’dii ay waxay rabto ka samaynaysay. Waxaa ku cibro-qaadasho mudan qaabka ay markii hore ku timid gobolka oo u eg midda maanta socota. Dhammaadkii 1992’dii waxaa Gedo qaybo ka mid ah qabsaday ururkii al-Itixaad. Wuxuu xarun ka dhigtay …
Dillaal iyo Darwiish
June 22, 2018	Suugaan 0
Ismaaciil Mire Cilmi waxa uu ahaa gabyaa weyn oo maansaruug ah, waagiisiina si weyn loo wada yiqiinnay. Sidoo kale waxa uu ka mid ahaa maqaddimiintii horkacayay halgankii Daraawiisheed ee Sayid-Maxamed Cabdille Xasan odayga ka ahaa. Waxa uu ku dhashay ceelka la yidhaahdo Laasadaar oo degaanka Buuhoodle ka tirsan wakhti ku …
June 21, 2018	Aragti 0
Doodda ummadeed ee ka aloosantay wadaxaajoodka “degdegga” heshiiska loogu rogi doono ee dhex maray Md. Farmaajo iyo Rw. Abii Axmed labo kooxood ayaa loogu qaybsamay, sida loo badan yahay. Koox qabta in Soomaaliya iyo Itoobbiya uu iskaashi dhex mari karo, laakiin ku kala taggan in iskaashigaasi maanta munaasab yahay iyo …
Tixraaca Qormadii Muxammad Yuusuf
Waxaan akhriyay qormo cinwaankeedu yahay “Ma dad dhoohan baan nahay?” oo uu inala wadaagay Muxammad Yuusuf. Waa qormo qurux badan oo qiimigeedu waarayo qarniyo badan . Aan uga mahadceliyo dadaalka badan ee aniga iyo in badan oo bulshada ka mid ah uu ugu yahay macallin joogto ah Muxammad shakhsi ahaantiisa. …